Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogadeniya ee UK oo ka qeybgalaya Munasabad balaadhan oo kadhacaysa London
Jaaliyada Ogadeniya ee UK oo ka qeybgalaya Munasabad balaadhan oo kadhacaysa London
Posted by ONA Admin	/ April 18, 2013
Jaaliyada Ogadeniya ee wadanka UK ayaa ka qeybgali doona Maalinimada Axada kulanweyn oo jaaliyada kasoo jeeda wadanka Turkidu isugu imaan doonaan magaalada London.
Jaaliyada Ogaden Community UK ayaa dhowaanahanba wada-shaqeyn lawaday qowmiyadaha kale ajanabiga ah si qadiyada somalida Ogadeniya loo gaadhsiiyo caalamka. Jaaliyada Ogadeniya ee UK waxay wada shaqeyn xoog badan la leeyihiin qowmiyado badan oo cadaan, madow iyo noockastaba leh.
Jaaliyada ayaa si xoogan isu abaabushay oo ku howlan sida ugu quruxbadan ee barnaamijkaas uga qeyb qaadan lahaayeen. Jaaliyada ayaa la filayaa in iyaga oo qeybaha kala gadisan ee bulshada ka kooban ka qeyb gali doonaan munsaabadan lagu soo casuumay.
Masuul kamid ah maamulka Jaaliyada London ayaa noo xaqiijiyay in munaasabadan ay dhaci doonto maalinimada Axada 21 April 2013 Saacada 1:30 Duhurnimo. Waxaa kale oo intaas masuulku noo raaciyay in munaasabadan lagu soo casuumay islamarkaasna ay kasoo jeedin doonaan hadduu allaah idmo hadal kooban oo jaaliyada lasiiyay in madashaas ay kasoo jeediyaan.
Hadaba Jaaliyada ayaa lasocodsiinaysa shacabweynaha Ogadeniya ee UK ku nool inay xafladan kasoo qeyb galaan islamarkaasna ay kala xidhiidhaan xogta barnaamijkaas iyo faah faahin waxii ay u baahdaan xafiiska Jaaliyada somalida Ogadeniya ee magaalada London.